Bafuna umthetho ovimba isithembu | Isolezwe
Bafuna umthetho ovimba isithembu
Isolezwe / 24 May 2012, 11:47am /
UNKKZ Ayanda Simelane ohola inhlangano Isakhiwo samakhosikazi Isithombe:GUGU MQADI
IYObaseka uma sebeshade ngokusemthethweni kuphela labo abangena esithenjini inhlangano eluleka abashadile, iSakhiwo Samakhosikazi.
Umholi wale nhlangano uNkk Ayanda Simelane (32) uthe akulula ukuthi baphikisane nesithembu njengoba kusemthethweni eNingizimu Afrika futhi kuwusiko kwabaningi la KwaZulu-Natal.
Yize bengeke baphikisane nakho, bayobaseka laba abakuso uma sebeshadile, hhayi uma besalobolene nje.
Ukhuluma lokhu nje le nhlangano isanda kuba nemashi yomkhankaso wokulwisana nokwanda kwamazinga okuhlukanisa kwemishado, iStop Divorce. Kule mashi esinye sezikhulumi eziphambili kwakulindeleke ukuthi kube ngomunye wamakhosikazi kaMengameli Jacob Zuma, uNkk Nompumelelo MaNtuli Zuma. Lokhu kwashiya abaningi bezibuza ukuthi ngabe inhlangano ithi abantu abayeke ukuhlukanisa bathathe isithembu.
UNkk Simelane uthe abanawo amandla okuphikisana naso ngakho babanika indawo yabo abasesithenjini futhi abaphikisani nabakwenzayo.
Uthe abakufisayo ukuthi kube nomunye umthetho onqanda abesilisa ukuthi bakwazi ukushintsha esikhaleni bathi sebefuna ukuthatha isithembu.
“Kungangcono uma kungathiwa kuba nomthetho ovimba abantu besilisa ekutheni bashintshe esikhaleni bathi bafuna ukuthatha isithembu. Bekungakuhle ukuthi ngesikhathi ethatha unkosikazi wokuqala amtshele ukuthi uyindoda ekholelwa esikweni futhi uzimisele ngokuthatha isithembu ngelinye ilanga,” kusho uNkk Simelane.
Uthe inkinga enkulu ukuthi abantu sebekubona kuyisitayela hhayi ngoba kuseyisiko.
Kungekudala kuvele amahlebezi okuthi le nhlangano ayivumelani nomshado wesibili womsakazi woKhozi uLinda Sibiya okusanda kuzwakala ukuthi usezinhlelweni zokuthatha unkosikazi wesibili.
UNkk Simelane uvumile ukuthi kunezinkulumo ezafakwa enkundleni yokuxhumana uFacebook yile nhlangano ezazitshengisa ukungahambisani nalo mshado kodwa kwakungewona umbono wenhlangano.
Uthe lokhu kwakulotshwe ngelinye ilunga le nhlangano liveza umbono walo.
Uqhube ukuveza kowesilisa ukuthi uhlose ukuthatha isithembu esikhaleni kwenza kube lula ukuthi umkakhe aqoke ukuhlukanisa.
“Ukuhlukanisa kuba yinto yokuqala efika engqondweni yowesifazane othola ukuthi umyeni wakhe uyaphinga noma uhlongoza ukuthatha unkosikazi wesibili,” kusho uNkk Simelane.
Uthe okubalulekile ukuthi umuntu othola lokhu azibheke kuqala ukuthi ungumuntu onjani nokuthi angakwazi yini ukumelana nokuba sesithenjini. Okunye okubalulekile ukuthi kufanele babheke ezinye izindlela zokubhekana nezinkinga ngaphambi kokuthi baze bafinyelele ekuthatheni isinqumo sokufaka isehlukaniso.
Le ntokazi ekhulele eMlazi yaqala le nhlangano ngenxa yezinto edlule kuzo njengoba ishade isencane.
“Ngasizwa ngomama abadala ngabona ukuthi kungakuhle ukuthi nami ngibe nendlela yokusiza abanye abazithola benezinkinga emshadweni ngoba akulula neze emshadweni,” kusho uNkk Simelane.
Uthe sebehlele ukuvula isikhungo esamukela izingcingo zezinkinga zabashadikazi.